Caabuqa Sanqada "Sinusitis"
Author Topic: Caabuqa Sanqada "Sinusitis" (Read 89260 times)
« on: February 25, 2015, 04:04:33 PM »
"Sinusitis" waa caabuq ku dhaca daldaloolada lafaha sanqada ee caafimaad ahaan loo yaqaano "Sinuses".
Sida caadiga ah, dulduleelada ama jeebabka sanqada waxaa ku jira hawa, laakiin markuu infekshan qaado waxaa ku aruuri karo dheecaan ay keento bakteeriyo ama feyras.
Xanuunada keeno in caabuq galo waxaa ka mida ah: Hargab-ka, Sanboor-ka, Hilibka sanka ka soo baxo ama carjowda sanka kala qeybiso oo qalloocan.
Xanuunkaan waxaa loo kala qaybiyaa 3 qeyb waxa ay na ku kala duwan yihiin kaliya muddada ay hayaan qofka, midka 1-aad waa mid si degdeg ah qof u qabto wuxuu ku bilawdaa hargab, hindhiso, san-durdur iyo xanuun wajiga ah, wuxuuna qofka hayaa in ka yar muddo bil ah.
Midka 2-aad wwuxuu qofka hayaa 1 bil illaa 2 bil gudahooda, Midka 3-aad qofka wuu ku soo noqnoqdaa wuxuuna hayaa muddo sanad ama ka badan.
Calaamadaha lagu garto xanuunkaan waxaa ka mid ah: Xanuun wajiga ah ama cadaadis in laga dareemo, Sanka oo cabursan, biyo ama duuf sanka ka yimaado, carfinta ama urinta oo sidii saxda ahayn, marmarka qaar waxaa la socdo madax xanuun iyo qufac.
Qofka hadduu ku raago wuxuu yeelanayaa qnadho, hawada afka iyo sanka oo urto, caajis jirka oo idil ah iyo ilko xanuun.
Waxaa lagu fahmaa in qofka uu yeesho duuf cagaaran oo adag oo ur badan iyo weji xanuun indhaha lafta ka ka korreysa, meesha ay labada indhood iskaga yimaadaan iyo lafta sanka dhinacyadiisa ah.
Waxaa lagu ogaadaa calaamadaha kor ku xusan oo aad takhtarka u sheegto iyo daqnasho aad ka dareento markuu takhtarka cadaadiyo meesha jeebabka sanqada ay wajiga kaga aadan yihiin sida ka muuqato sawirkaan hoose:
Kadib duufka ayaa la beeri karaa si loo ogaado caabuqa hayo jeermiska keenay nooca uu yahay, ama in la saaro sanqada raajo lagu fiiriyo in jeebabka ay wasakh fadhiso iyo in kale.
Takhtarka wuxuu adeegsan kara tubo afka hore kaamiro ku leh si loogu soo eego in meel xadhiban ay jirto iyo cilladaha kale ee aan si toos ah indhaha loogu arki karin.
Markuu caabuqa sanqada uu cusub yahay, wuxuu takhtarka kuu qorayaa daawooyin infekshanka la dagaallamo iyo xanuun baabiye iyo daawo cabburka iyo hindhisada yarayso, haddii qandho ku heysane, daawo qandhada kaa jabiso. waxaa daawada badanaa la qaataa 2 usbuuc ugu badnaan.
Hadduu xanuunkaaga uu yahay mid raagay, waxaad u baahan tahay in wasakhda ku jirta sanqada sidii lagu daaweyn lahaa loo howlgalo, waxyaabaha la samayn karo waxaa ka mid ah in lagugu uumiyo biyo qandac ah si ay u soo jilcaan oo aad u soo diifsatid, in wejiga la saarsaaro wax qandac ah sidoo kale, in sanka lagaaga dhibciyo biyo cusbo leh ama laguu qoro goojooyin ama wax lagu buufiyo sanka oo daawo leh.
Haddii intaa wax tari wayso waxaa u baahnaan kartaa qalliin lagu sameeyo ama qaab looga soo dhuuqo wasakhda ama lagu daaweeyo cilalda xanibnaanta in la sameeyo.
Fadlan dhakhtarkaaga E.N.T-ga kala tasho qaabka ugu habboon ee xanuunkaan loo daaweyn karo.
Marmarka qaar takhtarka wuxuu sanka kaa galin karaa tubo lagu soo dhuuqayo wasakhda dhex fadhiso lafaha sanqada dhexdooda.
Xanuunkaan haddii aan la daaweynin wuu sii fidi karaa oo waxuu gaari karaa maskaxda wuxuuan keenayaa markaas xanuunka qoor-gooyaha ee "Meningitis".
Haddii aad qabtid su'aalo la xiriira xanuunkaan waad noo soo diri kartaan.
Re: Caabuqa Sanqada "Sinusitis"
« Reply #1 on: December 25, 2015, 02:01:31 AM »
?? DR aaad ayan kuu salaamayaa
mudo afar sano ah waxaa i hayay xanuun xanuun kaas oo aanan fahmayn markaa lkn awal wuxuu igaga bilaabmay qamunka oo i xanuunay kdib wxuu yeeshay in uu sanka mar walba i xidhnaado ur kasoo baxda sanka inuu yeesho hada lajoogo afka laftiisu waxa uu yeeshay ur waxaa jirta mar marka qaar kood ee habudhku saaid igu noqdo in dhiig yar aaan kataabto sanka gudi hiisa markan farta galiyo lkn waa xiliga aab sigaar ka cabo ama aan badsado
cunaha dalqada sare meel aan uma leeyay halka sanka iyo afka isaga yimaadan way ixanuuntaa marka aan milix kuluq luqdo iyo xataa markan hindhisaba laabta lafteeda waxaan kadareemi jiray culays oo hadba dhinac ah lkn hada mudo taas ma arag dr ilaahy aakhiro iyo aduunba garabkaaga hagalo . iiga soo jawaab
« Reply #2 on: January 09, 2016, 03:42:34 PM »
Fadlan marka ugu horeysa, jooji cabista sigaarka, cudurkaan wuu u daran yahay sigaarka.
Midda xigta la xiriir dhakhtar E.N.T si loo hubiyo inuu xanuunkaan yahay, kadib laguug sheego heerka uu marayo iyo sida loola tacaali karo hadda.
Views: 14759 September 16, 2009, 10:54:46 AM
Views: 116109 March 24, 2011, 06:20:25 PM
Views: 7394 July 10, 2016, 11:38:35 AM
Caabuqa Fangaska ee Faraha Cagta Gala
Views: 49981 May 19, 2016, 05:50:26 PM
Caabuqa Caloosha Ee Aaan Lagu Baraarugsanayn.
Views: 57004 September 12, 2017, 07:57:44 PM